सबैलाई रुवाउने गायक नारायण रायमाझीको मार्मिक गीत ‘हे मेरी आमा’ सार्वजनिक (भिडियो) - Kanchanjangha Online
सबैलाई रुवाउने गायक नारायण रायमाझीको मार्मिक गीत ‘हे मेरी आमा’ सार्वजनिक (भिडियो)
नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तिजको अवसरमा गायिका देवी धर्तिको आवाजमा हजारौ नारीको बास्तविक भोगाईमा आधरित गीत “हे मेरी आमा” गीतको भिडियो बजारमा आएको छ ।
तिज जस्तो पर्वमा पनी माइतिको आगँनमा आउन नपाउदाको चेलीको बेदनालाई गीतमा समेटिएको छ । जिवनमा दुख हुदाँ पनी हजारौ पिडा सहेर पराईको घरमा बस्नु पर्दाको पिडा गीतमा पोखिएको छ । रोगी सासु ससुराको स्याहार सुसारमा बस्नु पर्ने अवस्थामा रहेकी बुहारीको पिडालाई गीतमा ब्यक्त गरिएको छ ।
रमेश विजिको शब्द तथा नारायण रायमाझी र विरही कान्छाको लय सिर्जना गीतमा रहेको छ । विवि अनुरागीको एरेन्ज गीतमा रहेको छ । निकै आकर्षक रुपमा तयार पारिएको भिडियोलाई मिराज अर्यालको छायाँकन तथा सम्पादन र नारायण रायमाझीको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । हे मेरी आमा गीतको भिडियोमा अनुष्का अधीकारी ,हिमाला गौतम , रमेश के.सी. मट्टारे ,अप्सरा अधिकारी , देबेन्द्र बब्लु,हरि अधिकारी , बिन्दु खड्का , सुमित्रा तामाड्ड एलीना ठकुरी ,सरु राई ,सोनीका गज्मेर , बिपना के.सी. सन्देश रायमाझीको अभिनय रहेको छ ।
“हे मेरी आमा “गीतको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ।
« मिलन सापकोटाको आवाजमा मौलिक तिज गीत” गोठालो “भिडियो सहित (Previous News)
(Next News) आरके र बिनीको ‘सुन भन्दा कम छैन, हराए डर छैन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) »